covid ၏သက်ရောက်မှုများသည်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် | သိမှုလေ့ကျင့်ရေး
ယခုအချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့သည် COVID-19 အကြောင်းနေ့စဉ်နှင့်အမျှကြားရလေ့ရှိသော၊ ၎င်းသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ နာမည်ဆိုးဖြင့်သေသည်အထိဖြစ်စေသည်။
အဖြစ်များသောပြဿနာအများစုမှာအဖျားတက်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်သော်လည်းအနည်းငယ်ဖော်ပြသောအချက်တစ်ခုရှိသည်၊ သုတေသနများစွာရှိသည့်အချက်မှာအသိဥာဏ်ချို့တဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
anosmia (အနံ့ပျောက်ခြင်း) နှင့် ageusia (အရသာပျက်ခြင်း) ရှိနေခြင်းသည်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအဓိကထားသည်။ ရောဂါသည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်ကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေထိခိုက်နိုင်ခြေရှိသည်.
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ပေးထားသည်COVID-19 ဒဏ်ခံရသူများတွင်မှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့မှုရှိနေခြင်းကိုအကဲဖြတ်သောအရေးကြီးသောလေ့လာမှုများပညာရှင်အုပ်စုတစ်စုသည်လက်ရှိရရှိနေသောအချက်အလတ်များကိုအနှစ်ချုပ်ရန်ဘာသာရပ်အပေါ်လက်ရှိစာပေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သည်.
ယခုအချိန်ထိကောက်ယူထားသောသုတေသန၏မတူကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုများစွာရှိသော်လည်း (ဥပမာ၊ သိမြင်မှုစမ်းသပ်မှုများတွင်ကွဲပြားမှုများ၊ လက်တွေ့လက္ခဏာများအတွက်နမူနာကွဲပြားမှု ... ) တွင်ဖော်ပြခဲ့သော ပြန်လည်သုံးသပ် စိတ်ဝင်စားစရာအချက်အလက်များတင်ပြသည်။
သိမြင်မှုအဆင့်တွင်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောလူနာများ၏ရာခိုင်နှုန်းသည်အနည်းဆုံး ၁၅% မှအများဆုံး ၈၀% အထိ (တစ်ပြိုင်နက်တည်း)
အများဆုံးမကြာခဏလိုငွေများသည်အာရုံစူးစိုက်မှု-စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်ကိုအလေးပေးလိမ့်မည်၊ သို့သော် mnemonic၊ ဘာသာစကားဆိုင်ရာနှင့်အမြင်အာရုံနှင့်ဆိုင်သောနေရာများလိုငွေပြမှုများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့်သုတေသနများလည်းရှိသည်။
နဂိုရှိပြီးသားစာပေဒေတာများနှင့်အညီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသိမြင်မှုစစ်ဆေးခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် COVID-19 လူနာများအတွက်ပင် MoCA သည် MMSE ထက်ပိုအရေးကြီးသည်။
COVID-19 (ရောဂါလက္ခဏာအနည်းငယ်တောင်ရှိနေခြင်း) ၌အသိဥာဏ်ချို့တဲ့မှုဖြစ်နိုင်ခြေသည် ၁၈ ဆမြင့်တက်လာလိမ့်မည်။
COVID-6 မှ ၆ လကြာကုသခဲ့သော်လည်းလူနာ ၂၁% ခန့်သည်မှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့မှုကိုဆက်လက်ပြသလိမ့်မည်။
ဗိုင်းရပ်စ်သည် CNS ကိုသွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့်သွေး-ဦး နှောက်အတားအဆီးနှင့် / သို့မဟုတ် olfactory neurons မှတဆင့် axonal transmission မှတဆင့်တိုက်ရိုက်ကူးစက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အာရုံကြောပျက်စီးခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်
ischemic သို့မဟုတ် hemorrhagic လေဖြတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသော ဦး နှောက်သွေးကြောများနှင့် coagulopathies များပျက်စီးခြင်း
အလွန်အကျွံစနစ်ကျသောရောင်ရမ်းမှုတုံ့ပြန်မှုများ၊ "cytokine storm" နှင့် ဦး နှောက်ကိုထိခိုက်စေသောအရံအင်္ဂါများပျက်စီးခြင်း
Global ischemia သည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှု၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကုသမှုနှင့်စူးရှသောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာစုဟုခေါ်သည်
COVID-19 ကိုအလေးအနက်ထားသင့်သည် anche ဖြစ်နိုင်သောအသိဥာဏ်ချို့တဲ့မှုအတွက်၎င်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအရာသည်အလွန်မကြာခဏပေါ်လာပြီးရောဂါလက္ခဏာများခံစားဖူးသောလူများကိုလည်းထိခိုက်စေလိမ့်မည်၊ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သော neuropsychological အပေးအယူများ၏မြင့်မားသောဇွဲကိုစိတ်ထဲတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
Ciesielska, N. , Sokołowski, R. , Mazur, E. , Podhorecka, M. , Polak-Szabela, A. , & Kędziora-Kornatowska, K. (2016) ။ Montreal Cognitive Assessment (MoCA) စစ်ဆေးမှုသည်အသက် ၆၀ ကျော်လူတို့တွင်အသိဥာဏ်ချွတ်ယွင်းမှု (MCI) ရှိ mini-Mental State Examination (MMSE) ထက်ပိုသင့်တော်သလား။ Meta-analysis ။ စိတ်ရောဂါ Pol, 50(5), 1039-1052 ။
Daroische, R. , Hemminghyth, MS, Eilertsen, TH, Breitve, MH, & Chwiszczuk, LJ (၂၀၂၁) ။ COVID-2021-ရည်ရွယ်ချက်စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်အသိဥာဏ်ချို့ယွင်းခြင်း။ အာရုံကြောအတွက်နယ်စပ်, 12, 1238 ။
Del Brutto, OH, Wu, S. , Mera, RM, Costa, AF, Recalde, BY, & Issa, NP (၂၀၂၁) ။ ရောဂါလက္ခဏာအနည်းငယ်ပြသော SARS - CoV - 2021 ကူးစက်မှုသမိုင်းကြောင်းရှိလူတို့တွင်အသိဥာဏ်ကျဆင်းမှု။ ဥရောပအာရုံကြောဆိုင်ရာဂျာနယ်.
Covid, COVID နှင့်အသိဥာဏ်ချို့တဲ့ခြင်း, COVID နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါဗေဒ, ကိုဗစ် -19
မိန့်ခွန်းကုထုံး၊ coronavirus နှင့် tele-ပြန်လည်ထူထောင်ရေး - အသုံးဝင်သောစာရွက်စာတမ်းများ
“ ပရိုဂရမ်းမင်း” အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ - ကျောင်းနေအရွယ်၌အစီအစဉ်ဆွဲခြင်းနှင့်တားမြစ်ခြင်းများအပေါ်သက်ရောက်မှုအမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာပညာရပ်များ၊ အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း
သင်ယူမှုပုံစံများ၊ သတင်းဆိုးနှစ်ခု (ဒါပေမယ့်လည်းသတင်းကောင်းနှစ်ခု)သင်ယူခြင်း၊ လေ့လာခြင်းနည်းလမ်း၊